च्याङ्ग्रा महँगियो ? लोकल कुखुरा जिन्दावाद ! | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | २४ आश्विन २०७८, आईतवार ११:१५ |
बागलुङ – दसैँमा च्याङ्ग्राको मासु खान सबैको गच्छेले भ्याउँदैन । यसपालि त झन् च्याङ्ग्रा धेरैका लागि रहरमा मात्र सीमित हुनेवाला छ । बजारमा रोज्जा च्याङ्ग्रालाई रु ४० हजार पर्छ , पसलबाट मासु किनेर खाँदा प्रतिकिलो दुई हजार ।
अब आफैं भन्नुस्, आम मान्छेले कसरी खान सक्छन्, च्याङ्ग्राको मासु ? यो त केबल हुनेखानेको भान्सामा मात्र पो पाक्ने भयो । के गरिब र श्रमजीवीले दसैँमा मिठोमसिनो खान नपाउनु , यो प्रश्नले हर कोहीलाई बिझाएको हुनुपर्छ ।
व्यापारी महेन्द्र केसीले मुस्ताङको जोमसोम पुगेर दसैँलाई च्याङ्ग्रा ल्याएको बताए । भाउ महँगिएका कारण पहिले झैँ धेरै च्याङ्ग्रा नल्याएको उनले सुनाए । सदरमुकाममा मासु पसलसमेत चलाउँदै आउनुभएका केसीले एककिलो च्याङ्ग्रोको मासुलाई एक हजार ८०० मा बेच्दै आएका छन् ।
“दसैँमा च्याङ्ग्राको मासु महँगो भएर के भो र ? लोकल कुखुरा, खसीबोका छँदै छन् नी !”, उनले भने, “ग्राहकलाई चाहिने जति कुखुरा दिन व्यवसायी तयार छन् ।” स्थानीय उत्पादनको प्रयोगले किसानलाई प्रोत्साहन मिल्नुका साथै आन्तरिक बजार चलायमान हुने उनको भनाइ छ । उनले सञ्चालन गरेको सापकोटा कृषि फार्ममा अहिले ५०० लोकल कुखुरा छन् । फार्ममा साकिनी, गुजुमुजे, उल्टे र घाँटीखुइले जातका कुखुराको व्यावसायिकपालन हुँदै आएको छ ।
कडकनाथ, बेन्टम, सिल्की र पोलिस जातको आयातित कुखुरा पनि पालिएको छ । यस्तै चरा प्रजातिका बट्टाइ र टर्की छन् । उपभोक्ताले इछ्याएको कुखुरा फार्मबाट किनेर लैजान सक्छन् । लोकल साकिने जातको भाले प्रतिकिलो ८०० मा बिक्री भइरहेको उनले बताए । आयातित कुखुराको भाउ भने चर्को छ ।
रातमाटामा सापकोटासँगै भविन्द्र विक, विजय शर्मालगायत लोकल जातका कुखुरापालनमा लागेका छन् । चौध वर्षसम्म मलेसियामा श्रम–पसिना बगाएर फर्किएका विक र विदेश जाने चक्करमा पटकपटक हण्डर खाएका उनले लोकल कुखुरामा आफ्नो भविष्य देखेका छन् । रासस
Previousछाब्दीलाई प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाइने
संसद विघटन राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात : प्रचण्ड
६ माघ २०७७, मंगलवार १६:२५
रंगशाला निर्माणको कामबाट धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनले आधिकारिकरुपमा नै हात झिक्यो
६ पुष २०७८, मंगलवार ०७:३७
दाङ बस दुर्घटनाप्रति नेविसंघद्वारा दु:ख व्यक्त, मृतकका परिवारलाई रोजगारी दिनुपर्ने माग
‘विश्व सुर्तिरहित दिवस’ : सुर्तिजन्य लत छुटाउन दोस्रो व्यक्तिको भुमिका महत्वपुर्ण
१७ जेष्ठ २०७८, सोमबार ११:५६